जनताको काम गर्दा राजनीति भन्दा माथि उठेर लाग्नुपर्छ : अध्यक्ष मगर « Bikas Times
जनताको काम गर्दा राजनीति भन्दा माथि उठेर लाग्नुपर्छ : अध्यक्ष मगर
राम थापा मगर
वडा नं. २ अध्यक्ष, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, भक्तपुर
नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका युवा नता हुन् राम थापा मगर। उनी मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष एवं नगर प्रवक्ता पनि हुन्। जनताको कामप्रति सधैं दत्तचित्त भएर लाग्ने उनी जुझारु नेता र स्पष्ट वक्ताको रुपमा चिनिन्छन्। कोरोना कहरबाट जनता जोगाउन लाग्ने क्रममा मगर आफै सक्रमित भए। नगरको विकास निर्माण र कोभिड नियन्त्रणको समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष मगरसँग कालिका महतले गरेको कुराकानी :
मध्यपुर ठिमीको नगरसभा हुन किन ढिला भयो ?
हाम्रोमा अलिअलि विवाद थियो। त्यसले समयमै नगरसभा गर्न ढिलाई भइरहेको थियो। अलिअलि कोभिडको कारणले पनि समयमा काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन। अर्को हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु पनि जनतासँग फेस गर्न डराएको अवस्था थियो।
यसमा चाहीं हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु जनतासँग अलि डराएको देखियो। सबै जनताले वडालाई बाहेस गरेर नगरपालिकालाई मात्रै बजेट दिने हो? भनेर प्रश्न गर्दछन्। फेरि यो वर्ष स्थानीय तहको चुनाव पनि आउँदै छ। अनि जनतामा यो कार्यसमितिले अहिलेसम्म के ग-यो त भन्ने कौतुहलता पनि छ । सबैले चाहने नगरको विकास नै हो। त्यसमा जनताको पनि चासो हुनेनै भयो।
यिनै समसामयिक विषयमा विवाद आएको थियो । त्यसपछि हामी जनप्रनिधि र जनतालाई विकास चाहिएको हो। जुन पार्टीबाट आएको भएपनि हामीले नगरको विकास नै चाहेका हौं। विकास गर्ने ठाउँमा पार्टी राजनीति नगरौं। राजनीति चुनावमा गरौला भनेर यसपालि पहिलाको भन्दा सहज ढंगले नगरसभा सम्पन्न भयोे।
यो चुनावी वर्ष भएर पनि होला। त्यस्तै ढंगले जनप्रतिनिधिहरु पनि प्रस्तुत भएको देखियो। सबैले आगामी स्थानीय चुनाललाई केन्द्रमा राखेर केही लचकताका साथ सहमति भएर नगरसभा सम्पन्न भएको छ। राजनीतिक एजेण्डा भन्दा पनि जनभावना र विकास निर्माणलाई सबैले साझा अवधारण बनाएर बाटो खोलियो। त्यसले पहिलाको दाँजोमा सहमति गर्न पनि सहज भयो।
अलिअलि अप्ठ्यारो त बेलाबेलामा भइनै रहन्थ्यो। तर, जस्तोसुकै अप्ठ्यारो भएपनि त्यसको समाधान त भइहल्छ। राजनीति सिद्धान्त नै फरक भएपछि अलिअलि विवाद र अप्ठ्याराहरु हुन्छन्। त्यसलाई सधैं विवादमा लिनुहुँदैन भन्ने हुन्छ। राजनीति विषयलाई लियर विवाद हुँदा उहाँहरुसँगै बसेर छलफल गर्र्छाै। राजनीति सिद्धान्त पार्टी फरक भएपछि काम गर्न धेरै अप्ठ्याराहरु भइरहन्छ। त्यसमा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका पनि अछुतो छैन।
मैले आफ्नो तारिफ आपैmले गरेर हुँदैन। त्यो यहाँका जनताले मुल्यांकन गर्ने विषय हो। म चाहीं मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. २ को वडा अध्यक्ष हुँ। यहाँका जनतामा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म मैले सम्बोधन गरेको छु। हामीले चुनावका बेला ल्याएका एजेन्डा र जनताले गरेको अपेक्षा अनुसार काम गरेको जस्तो लाग्छ। त्यो अनुभूति जनताले पनि गरेका छन्।
हाम्रो घोषणापत्र अनुसार मैले काम गरेको छु। त्यसअनुसार जनताबाट पनि सल्लाह, सुझाव, साथ र सहयोग पनि पाइयो । धेरैको काम गर्दा केही कमीकमजोरीहरु भएहोलान्। कसैकसैलाई कमी भएको हुन सक्छ। तर, समग्रमा मेरो वडाका आमजनता सन्तुष्टै भएको पाएको छु।
मध्येपुर ठिमी नगरपालिका चाहीं काठमाडौं महानगरपालिकाको ३२ नम्बर वडा जोडिएको छ। पहिला त्यो ३२ वडा एक किसिमको थियो, यो २ नम्बर एक किसिमको थियो। त्यो ठ्याक्कै मनहरा खोलाले छुट्याउँछ। अहिले काठमाडौंको ३२ नम्बर वडा र मध्येपुर ठिमीको २ नम्बरमा केही फरक छैन। मैले काम गरेको छ कि छैन भनेर त्यही बाटो हेरेरै भन्न सक्छन्। मेरो वडामा कत्तिको विकास भएको छ। मैले सही काम गरेको छु कि छैन भनेर मैले भन्नै पर्दैन जनाले नै भन्छन्।
यसपालि ढलनिकालमा पनि हामीले ठूलो छलाङ्ग मारेका छौं। यसअघि ढलको एकदमै समस्या भएको मध्येपुरको १ नम्बर, २ नम्बर र ३ नम्बर हुन्। यहाँ ढलनिकासको ठूलो समस्या थियो। त्यसको लागि नगरबाट बजेट छुट्याउन गाह्रो भएकाले यसपालि हामीले वडाबाटै बजेट छुट्याएर काम ग-यौं।
यहाँ हामीले लगभग ४० लाखको लागतमा ढलनिकासको काम ग-र्यौं । यसले वर्षाको समयमा हिलो भएर ढुंगा चढ्नुपर्ने घरमा जान र हिउँदमा धुलोले सधैं झ्यालढोका थुनेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यस्तो ठाउँमा यसपालिका ढल हालेर ग्राबेल भइसकेको छ। अब छिट्टै ती ठाउँमा कालोपत्रे गर्दै छौं। त्यसको अनुभूति वडावासीहरुले गरेका छन्।
कोरोनाले विश्वलगायत देशै आक्रन्त भएकाले त्यसबाट हाम्रो वडा पनि अछुतो रहेन। नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु गरेपछि हामीले पनि आफ्ना वडावासीमा रोगबाट बच्न विभिन्न किसिमका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन ग-र्यौं। लकडाउनका बेला जनता घरघरमा थुनिनुप-यो। दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खानेलाई समस्या भयो । त्यसबाट जोगाउन विभिन्न दातृ निकायसँग कोअडिनेसन गरेर उहाँहरुलाई केही राहतको व्यवस्था गरियो।
वास्तविक पीडित परिवार खोजेर राहतको व्यवस्था गरियो। त्यो देखेर दातृ निकायहरु खुसी भएर अभैm त्यस्ता वास्तविक पीडित खोज्नुहोस् भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि हाम्रा वडाका वास्तविक पीडितलाई परिपूर्ति भइसकेपछि हामीले वडा नम्बर १ समेत गएर त्यहाँका वास्तविक पीडित खोजेर राहतको व्यवस्था मिलायौं। यसरी अर्को वडाका ५ सय सुकुम्वासी घरधूरीलाई सहयोग गर्ने मौका हामीले पायौं ।
रोकथामको लागि माक्स, स्यानिटाइजर प्रयोगका लागि विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्पmत् जनतालाई सुसूचित गराउन अवार्नेसको काम ग-यौं। त्यसपछि कोरोना परीक्षण गराउन थालियो। गम्भीर समस्या देखिएकालाई अस्पताल लाने, अक्सिजनको समस्या परेकालाई व्यवस्था मिलाउने काम गरियो। त्यसको साथै स्वास्थ्य सामाग्रीहरु वितरण गर्ने काम पनि गरियो।
त्यसपछि होम आइसुलेसनमा बस्न नमिल्ने मान्छे बस्नको लागि नगरभरिका मान्छे बस्न मिल्ने गरी एउटा आइसोलेसन सेन्टरको बनाएका छौं। यसपालि अक्सिजन अभावले धेरै मान्छेलाई सतायो। त्यसबेला हामीले व्यक्तिगत खर्चमा पनि अक्सिजनको व्यवस्था ग-र्यौं। त्यसरी व्यवस्था गरिएका अक्सिजनहरु केही अस्पतालहरुलाई, केही होम आइसुलेसनमा बस्नेलाई दियौं।
अहिले एकदमै न्यून गतिमा देखिएको छ। परीक्षण गराउँदा अरुको तुलनामा एकदमै कम हाम्रो वडामा देखिएको छ। अब हामीले सम्पूर्ण वडावासीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौं। खोप लगाउने काम सुरु भइरहेको छ। तपाईंले फोन गर्दा पनि म खोप लगाउने कार्यक्रममै थिएँ। अहिले भेरोसिल खोप लगाउने काम भइरहेको छ। यस वडाका धेरै मान्छेले खोप लगाउने अवसर पाइसकेका छन्।
खोप लगाइसकेपछि मान्छेमा मनोबल बढेको छ। ‘अब मैले खोप लगाएँ, मलाई केही हुँदै’ भन्ने लाग्नु स्वभाविकै हो। तर, खोप लगाउँदैमा संक्रमण नहुने चाहीं होइन। यसले मान्छेहरुमा आत्मविश्वास बढाएर त्रासमुक्त बनाएको छ।
मनोबल बढ्ने नाममा लापरवाही पनि बढ्ला नि ?
त्यसको निवारणको लागि हामीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट खोप लगाउँदैमा संक्रमण नहुने होइन। त्यसको लागि विश्वस्वास्थ्य संगठनले अपनाएको मापदण्ड अनुसार भौतिक दुरी कामय गर्ने, माक्स लगाउने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने जस्ता जनचेतनामूल सन्देशहरु दिइरहेका छौं।
अलिअलि आएका छन्, यसपालिबाट त्यो पनि गर्ने ठाउँ हुँदैन। हामीले विकास निर्माणका काम गर्दा प्राथमिकताका आधार गर्दछौं। कुन ठाउँमा तत्काल गरिहाल्नुपर्ने, कुन ठाउँमा अलिपछि गर्दा पनि हुने भन्ने हुन्छ। त्यसरी प्राथमिकताको आधारमा पालो पछाडि आउनेहरुले हाम्रोमा चाहीं भएन भन्ने गुनासो गरेको कर्तकतै सुनिन्छ। अब त्यो आउँदैन, त्यस्ता ठाउँमा हामी छिट्टै काम गर्दैछौं।
भर्खरै सम्पन्न नगरसभाले कुन क्षेत्रलाई फोकस गरेर बजेट पारित ग-यो त ?
अहिले कोरोना आतंकले विश्वलाई सताएकाले हामीले पनि यसपालिको बजेट त्यसकै नियन्त्रण, उपचार र खोपको लागि बजेट फोकस गरेका छौं । विश्वस्वास्थ्य संगठनका अनुसार थप भेरियन्ट आउँदा बालबालिकालाई बढी असर गर्दछ भन्ने भनाइ छन । त्यसैले तेस्रो भेरियन्ट आउँदा धेरै भयाबह अवस्था नआवस् भनेर पूर्वतयारी गरेका छौं । अहिलेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई फोकस गरेका छौं ।
अहिले टोलटोलमा जाने अवस्था छैन। त्यसैले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट समाचार, विज्ञान प्रकाशन, प्रसारण गरेर जनचेतानामूल सूचना आदानप्रदान गर्ने काम गर्ने गरेका छौं।
कलेज, स्कुल सञ्चालन गरेर भिडभाड भएको छ कि छैन ?
त्यसको लागि हामीले प्रत्यक्ष मनिटरिङ गरेर रोक्ने काम भएको छ। पहिलो लकडाउनको बेलामा पनि एक, दुई स्कुलले लापरवाही खोल्ने गरेमा हामी आफै गएर तुरुन्त बन्द गराएका थियौं। उहाँहरुलाई हामीले भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने काम नगर्नुहोस्। अनलाइन क्लास चलाउनुहोस् भनेका थियांै । अहिले चाहीं त्यस्तो समस्या छैन।
जग्गासम्बन्धी समस्याका मुद्दा कत्तिको आउँछन् ?
त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु धेरै आउँछन्। विकास निर्माणका काम गर्दा, बाटो फराकिलो गर्दा, बिजुलीको पोल सार्ने क्रममा गुनासाहरु आउँछन्। त्यसमा मेरो धेरै जग्गा गयो, बिजुलीको पोल मेरो जग्गामा प-यो। सडक, ढल खन्दा मेरो जग्गा काटियो, फलानाले मेरो मिचिदियो भनेजस्ता समस्याका थुप्रै मुद्दाहरु आउँछन्।
त्यस्ताखाले मुद्दा कसरी मिलाउनुहुन्छ त ?
यहींका पुराना वासिन्दाहरु हुन्छन्। म पनि यहीको स्थानीयवासी हुँ। सबैले चिनेका हुन्छन्। त्यो भएपछि उनीहरुलाई मैले चिनेको, आफैले भोट दिएर जिताएको मान्छे भएपछि मेरै फेबरमा काम गरिदिन्छन् भन्ने उनीहरुमा विश्वास हुन्छ। हामीले पनि कसैलाई मार नपर्ने गरी निश्पक्ष ढंगले निर्णय गरिदिन्छौं । त्यसमा एक, दुई बाहेक धेरैमा ठिक गरेको छ भन्ने भएपछि चित्त बुझाउँछन्। फेरि हामी गइसकेपछि धेरै ठाउँमा त्यस्ता विवादहरु एकाएक समाधान हुन्छन्।
आगामी पार्टी राजनीति यात्रालाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
म चाहीं वडा नं. २ अध्यक्ष हुनुका साथै मध्येपुर ठिमी नगरपालिकाको प्रवक्ता पनि हुँ। प्रवक्ताको हैसियतले नगरका सबै वडामा काम गर्ने मौका पनि मिल्यो। त्यसले सबै वडाका प्रतिनिधि र जनतासँग नजिबाट घुलमिल गर्ने अवसर प्राप्त भयो। मध्येपुर ठिमी नगरपालिकामा ९ वटा वडा छन्। प्रवक्ताको हैसियतले ती ९ वटै वडाका जनताका काम गर्ने अवसर पाइयो । अब नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन हुँदै छ।
वडा अध्यक्ष हुँदा प्रवक्ताको काम गरेको अनुभवले कांग्रेस महाधिवेशनमा मध्येपुर ठिमी नगरपालिकाको नगर सभापति उठ्ने तयरीमा छु। त्यसमा धेरै साथीहरुले साथ, सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसलाई सम्मान गर्दै आसन्न नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा मध्येपुर ठिमी नगरपालिकाको नगरसभापति उठ्दै छु।
नगरसभापतिमा ठूलै प्रतिस्पर्धा होला नि ?
धेरैजनाको सल्लाह, सुझाव र सुझबुझका साथ अगाडि बढेकाले नगरसभापतिमा चुनाव जित्छु भन्नेमा ढुक्क छु। वडा अध्यक्ष हुँदा नगरका सबै वडाको काम गरेकाले पुराना साथीहरुले तिमी हुँदा राम्रो हुन्छ भनेकाछन्। त्यहीं आत्मविस्वासका साथ मैले यो पाइला चालेको हुँ।